ရောင်စုံ Flame ဟာနေအိမ်အပူပေးစက်
2018 က New Arrival ဖုန်း APP ကိုထိန်းချုပ်ရေးအပူချိန် Adjus ...
အသိဉာဏ်လျှပ်စစ်မီးလင်းဖို 60 "အကြီးစားအရွယ်အစား ...
မီးလင်းဖိုလက်ထွင်းထုသဘာဝ White က M ကိုထွင်းထုစကျင်ကျောက် ...
အတိုငျးမီးလျှံက Settings ပြင်ပလျှပ်စစ်မီးလင်းဖို ...
shipping စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: FOB ရှန်ကျန်းငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: TT / LC MOQ: 100 ယူနစ်စျေးနှုန်း: ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် Size: စိတ်ကြိုက်ကုန်ပစ္စည်း DescriptionThe အသစ်သောသစ်သား-ပလပ်စတစ်ပစ္စည်း, ပလပ်စတစ်နှင့် cellulose (ဝါးအမှုန့်, မြက်ပင်မှုန့်ကို လုပ်. , ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာဗေဒပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် အထူး process.Its ရေစုပ်ယူမှုနှင့်ပစ်မှုန့်, သစ်သားမှုန့်) ကိုချေးခုခံ၏ 2/1000 အောက်ထင်းဆယ်ကျော်ကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းလက္ခဏာများရေစိုခံ, အစိုဓာတ်ကိုအထောက်အထားမရှိချဲ့ထွင်မှုမရှိပုံပျက်သော, အဘယ်သူမျှမလောင်သောအသံ * ဎ ...
shipping စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: FOB ရှန်ကျန်း
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: TT / LC
အသစ်သစ်သား-ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းအထူး process.Its ရေစုပ်ယူမှုနှင့်အတူပလပ်စတစ်နှင့် cellulose (ဝါးအမှုန့်, မြက်ပင်အမှုန့်, ကျောက်အမှုန့်, သစ်သားမှုန့်) ၏ လုပ်. , ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာဗေဒပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ချေး၏ 2/1000 အောက် ခုခံရေးထင်းဆယ်ကျော်ကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။
ရေစိုခံ, အစိုဓာတ်ကိုအထောက်အထားမရှိချဲ့ထွင်မှုမရှိပုံပျက်သော, အဘယ်သူမျှမလောင်သောအသံမရှိပုပ် * ။ ဒါဟာရိုးရာသစ်သားထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြု Bu မနိုင်ရှိရာ damp ပတ်ဝန်းကျင်, usedin နိုင်ပါသည်။
* Inset ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး, ခြခုခံ, ချေးခုခံ, Anti-အိုမင်း, ရှည်လျားဝန်ဆောင်မှုဘဝ pests ။
* အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းမှု, အနိမ့်ကာဗွန်, ပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေ, စွမ်းအင်ချွေတာရေးနှင့်ထုတ်လွှတ်လျော့ချရေး။
* မီး-နှောင့်နှေးတန်း B1.It anyharmful ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ရာမဟုတ်မီးကိုရပ်တန့်ဖို့ထိရောက်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
* ကောင်းမွန်သော plasticity, ရောင်စုံ, ညှိုးနွမ်းဖို့မလွယ်ကူပါဘူး, သစ်သားထိ, အပြည့်အဝ personalizedmodeling နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုထင်ဟပ်နိုင်ပါ။
* ဒါကြောင့်အချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ချွေတာ, ရိုက် planed, sawed, ရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူပါတယ်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် installationsteps နှင့်အတူတူးနိုင်ပါသည်။
တိုင်းပြည်၏ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမူဝါဒနှင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပစ္စည်း * စွမ်းအင်ချွေတာရေး, ။
ယခင်: WPC ન્યાયપીઠ
နောက်တစ်ခု: વુડ પ્લાસ્ટિક ફૂલ બોક્સ
XinYingXin အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာအဆင့်မြင့်ကိရိယာများကိုမိတ်ဆက်နှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်သည်။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးနှင့်ကောင်းသောဂုဏ်သတင်းနှင့်အတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ဥရောပ, မြောက်အမေရိက & တောင်အမေရိက, သြစတြေးလျ, အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အရှေ့အာရှအတွက်အလွန်လူကြိုက်များကြသည်။ အပြင်ကျနော်တို့ ...... ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများကိုကျော် 30000sqm ၏ဧရိယာအနှံ့ span နှင့်လျှပ်စစ်မီးဖို၏နှစ်ပတ်လည် output ကိုတစ်သန်းအပိုင်းပိုင်းပမာဏသည် Walmart, THE Home Depot, ကနေဒါတုရုမြို့, MENARDS တူသောကမ္ဘာကျော်လုပ်ငန်းများနှင့်အတူကောင်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့ကြသည်။ အပြင်ဒီကနေကျနော်တို့ကိုအောင်မြင်စွာ ISO9001, GS, အီး, EMC, CSA, SAA နှင့် FSC ၏နိုင်ငံတကာအရည်အသွေးမြင့်လက်မှတ်များတယ်
ပလပ်စတစ် Wood ကထုတ်လုပ်သူများ
Wood က Extrusion
သစ်သား Injection ကိုမှို
သစ်သားပလတ်စတစ် Composite ပရိဘောဂ
သစ်သားပလတ်စတစ် Composite Injection ကိုမှို
သစ်သားပလတ်စတစ် Composite ထုတ်လုပ်သူများ
သစ်သားပလတ်စတစ် Composite ပေးသွင်း
သစ်သား Reels ပေးသွင်း
Wpc Wood က
Wpc Wood ကပလတ်စတစ်
Wpc Wood ကပလတ်စတစ် Composite
Wpc Wood ကပလတ်စတစ် Composite စျေး
Remote နှင့်အတူ 12V output ကိုမီးဖိုထိန်းချုပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့ ...
Adress: 7th ကြမ်းပြင်, အရှေ့အဆောက်အဦ B, weihuada စက်မှုပန်းခြံ, longhua ခရိုင်, Shenzhen
E-mail ကို: Sales@werised.com